कोरोना जितेका ८ जनालाई यसरि गरियो डिस्चार्ज ( फोटो सहित ):: Mero Desh
कोरोना जितेका ८ जनालाई यसरि गरियो डिस्चार्ज ( फोटो सहित )
Published on: २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०७:०२
विराटनगर : विराटनगरको कोरोना उपचार केन्द्रबाट शुक्रबार एकैपटक ८ जना डिस्चार्ज भएका छन् । उदयपुरको भुल्केमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भई वैशाख ८, ९ र १० गते ल्याइएका मध्ये एक महिलासहित ८ जना डिस्चार्ज भएका हुन् । लगातार तीन पटकको
स्वाब परीक्षणमा कोरोना नेगेटिभ आएपछि उनीहरुलाई डिस्चार्ज गरिएको कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. संगीता मिश्राले जानकारी दिइन् ।
शुक्रबार डिस्चार्ज हुनेमा एक भारतीय नागरिक पनि छन् । अन्य दुईजना विराटनगर १७ का र एक महिलासहित बाँकी ५ जना उदयपुर भुल्केका स्थानीय हुन् । उपचार केन्द्रमा रहेका ६ जना गत बुधबार कोरोनामुक्त भएर डिस्चार्ज भएका थिए । ती सब भारतीय नागरिक थिए । हाल सम्म ७ भारतीय र ७ नेपाली नागरिक डिस्चार्ज भएका हुन् ।
एकैपटक ८ जनालाई कोरोना विषेश अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिँदै । तस्विर : रविन भट्टराई
शुक्रबार डिस्चार्ज हुनेहरुमा भारतीय नागरिक २४ वर्षीय मो. आदिम, विराटनगर १७ का ७२ वर्षीय आइमुन मियाँ र ६० वर्षीय इजरायल मिया, उदयपुर भुल्केका २० वर्षका अजाद आलम, १८ वर्षका माँ इमरान अहमद, १८ वर्षकै परबेज आलम, ४१ वर्षका मोख्तार मियाँ र ५५ वर्षका रौसन खातुन रहेका छन् ।
शुक्रबार डिस्चार्ज भएका महिलालाई होम क्वारेन्टाइन र बाँकी ७ जनालाई विराटनर रानीस्थित मस्जिदको क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ । अब अस्पतालको आइसोलेसनमा १७ जना संक्रमित छन् । यसअघि डिस्चार्ज भएका ६ जनालाई विराटनगरस्थित रानी मरकजमा क्वारेन्टाइन राखिएको छ ।
शुक्रबार संक्रमितलाई निगरानी गरी निको पारेकोमा बिरामीका आफन्त र मस्जिदका पदाधिकारीले प्लेकाडमा लेखेर चिकित्सक र प्रदेश १ सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए ।